देउवाको आपत्तिजनक कदम : नेपालको आन्तरिक विषय भारतीय आँगनमा किन ?
नेपालको सेनाकै विषय पनि त्यस विवादास्पद वक्तव्यमा परेको छ । के सेनाले त्यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजिनक रूपमा खुलस्त पार्नु पर्दैन ? हाम्रो विचारमा यो अति आवश्यक छ । अन्यथा नेपाली सेनाको बारेमा आजसम्म कायम रहँदै आएको सकारात्मक जनधारणा भोलि कायम नरहने जोखिम आउन सक्छ ।